Elasticsearch, Solr, Algolia နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
စမ်းသပ်မှုတွင် install လုပ်ပါ
အားလုံးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အားလုံး add-ons တွေပါဝင်သည်
မည်သည့်လိုင်စင်မဆိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းပါ
localhost, dev.domain, test.domain, staging.domain
€	199 / တစ်နှစ်လျှင်
အခမဲ့7ရက်ရုံးတင်စစ်ဆေး
ဒါပေါ့။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ လမ်းပြ.
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့လာလည်ပါ သရုပ်ပြ ၂၀ ကျော်။ WooCommerce (ထုတ်ကုန် ၁၀၀၀၀၀ အထိ)၊ Elementor၊ စျေးကွက်ရှိအဓိကအကြောင်းအရာများအတွက်၊ ကုမ္ပဏီများ၊ Elasticsearch, Apache Solr, Algolia နှင့် Weaviate တို့အတွက်သရုပ်ပြခန်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့လာလည်ပါ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုသုံးပါ နှင့် ထောက်ခံစာ
ပလပ်ဂင်များ / ခုများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သလား။
ဒါပေါ့။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ အင်္ဂါရပ်များနှင့် plugins / themes များ.
Solr၊ Elasticsearch၊ Algolia, Weaviate တို့၏ဆရာဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ WPSOLR သည်ရှာဖွေရေးညွှန်းကိန်းများကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုဂရုစိုက်သည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုများသောအားဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်ကျွမ်းကျင်သူအနည်းငယ်ကလုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော် WPSOLR ဖြင့်ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်သကဲ့သို့လွယ်ကူပါသည်။ WPSOLR admin မှရလဒ်များကိုမည်သို့ပြရမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူပြီးအတော်လေးစွဲလမ်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် WordPress တီထွင်သူများနှင့်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း WordPress ရှာဖွေခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိခဲ့သည်။ WordPress ရှာဖွေမှု၏အထင်ရှားဆုံးသောပြissuesနာများဖြစ်သောနှေးကွေး၊ မတိကျ၊
အခမဲ့ download ကဘာလဲ?
အခမဲ့ download link သည်အင်္ဂါရပ်များနှင့် add-ons အားလုံးနှင့်အတူ WPSOLR ကိုအခမဲ့ download လုပ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်မေးခွန်းမျှမမေး၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းမပါ၊ လိုင်စင်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်သင်က၎င်းကိုစမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင်သာအသုံးပြုနိုင်ပြီး url တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုက်ညီသည်။ localhost, နတ်သမီးဒိုမိန်း, စမ်းသပ်။ဒိုမိန်း, ဇာတ်စင်။ဒိုမိန်း
trial link သည် WPSOLR အားအင်္ဂါရပ်များနှင့် add-ons အားလုံးနှင့်အခမဲ့ download လုပ်လိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှု0င် (သုည) ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေသည့်ပရိုဆက်ဆာ 2checkout မှတောင်းလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပလပ်အင်ကို activate လုပ်ရန်လိုအပ်သောလိုင်စင်ကိုရယူပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုအီးမေးလ်များတွင်ပါသောဖျက်သိမ်းမှုလင့်ခ်ကို လိုက်၍ ၇ ရက်ရုံးပိတ်ရက်အတွင်းသင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏စာရင်းသွင်းမှုကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
ELASTICSEARCH, SOLR, ALGOLIA, WEAVIATE ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းတို့သည်သင်၏ဆာဗာပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်သောဆော့ဝဲလ်အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ WPSOLR သည်၎င်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုအဆင့် ၂ ဆင့်ဖြင့်စီမံသည်။ Indexing: သင်ရွေးချယ်သောဒေတာကို“ indexing” (ပေးပို့ရန်အချက်အလက်များကိုပိုမိုထိရောက်သောဖွဲ့စည်းပုံသို့ပြောင်းရန်) အတွက်ပို့သည်။ Querying - ရှာဖွေသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့် filter များကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်
ဘာကြောင့်ငါ ELASTICSEARCH, SOLR, ALGOLIA, WEAVIATE လိုအပ်သနည်း။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးမားဆုံး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် SaaS အားလုံးသည်၎င်းတို့ကိုလည်းအသုံးပြုသော်လည်းသင်မသိပါ၊ သူတို့အတွက်သင့်အားငွေပေးချေသည်။
WPSOLR သည် ၁၀၀% WordPress plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင့်အခင်းအကျင်း၏ရှာဖွေရေးပုံစံတွင်လုံး ၀ ပါဝင်လိမ့်မည်။
WPSOLR သည် ၁၀၀% WordPress plugin တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင့်အခင်းအကျင်း၏ရှာဖွေရေးပုံစံတွင်လုံး ၀ ပါဝင်လိမ့်မည်။ မင်း ဒေသတွင်းတွင်အခမဲ့ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များထဲမှတစ်ခုကိုထည့်သွင်းပါ, ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမှာတစ် ဦး အဘို့အပေးဆောင် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုတည်ခင်း.ည်.
ကျွန်ုပ်တို့မှအများစုနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်သင်၏စာနှင့်ရုပ်ပုံများမှသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူသည် နက်ရှိုင်းသောသင်ယူခြင်း API များ
မကြာခင်လာတော့မယ်၊ ငါတို့လည်းပေါင်းစည်းသွားမှာပါ Weaviate Open-source Semantic search ။ ဤအရာသည်သဘာဝဘာသာစကားရှာဖွေခြင်း၊ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ၊ ခွဲခြားခြင်းများကိုစာသားများနှင့်ရုပ်ပုံများအရပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
"ဒီပလပ်အင်သည်သင်၏ WordPress (သို့) WooCommerce ဆိုက်အတွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုလျင်မြန်ပြီးတိကျသေချာစေပါသည်"
"Cloudways တွင် WordPress တွင် Elasticsearch ကိုမည်သို့ Configure လုပ်ရမည်"
"Solr သုံး၍ သင်၏ WordPress ရှာဖွေခြင်းကို Turbocharge"
"Apache Solr နှင့် WordPress ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှာဖွေခြင်း"
စာမျက်နှာတစ်သန်းကျော်ပါ။ WPSOLR ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရွယ်အစားကြောင့် CartoChrome ကိုအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဟာခင်မင်စရာကောင်းပါတယ် အခုအချိန်မှာ CartoChrome မှာစာမျက်နှာပေါင်းသန်းတစ်ရာကျော်ရှိပြီး WPSOLR ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် WPSOLR အားသူတို့၏ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားသည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပက်ထရစ်
စတီဖင် Umunna CartoChrome.com ကိုတည်ထောင်သူ
WPSOLR သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ WooCommerce လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ WPSOLR ကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ Woocommerce ထုတ်ကုန်ရှာဖွေခြင်းကို WPSOLR ဖြင့်အစားထိုးခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ယခု၎င်းသည်ဆိုင်များ၊ အမျိုးအစားများနှင့်စီစစ်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ WPSOLR မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ထုတ်ကုန်သန်းတစ်ဝက်နှင့်အတူဤကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာကိုတွက်ချက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလုပ်! လိုအပ်ပါကဖောက်သည်အထောက်အပံ့သည်လျင်မြန်ပြီးအလွန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ Plugin သည်မည်သူမဆို၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောရွေးချယ်မှုများစွာကိုခွင့်ပြုသည်။ WooCommerce ဆိုင်တွင်လျှပ်တစ်ပြက်အမြန်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါက၎င်းသည်သန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်ကုန်များကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ စံနမူနာပြကြယ် ၅ ပွင့်၊
ဗစ်တာ Pires oemperformance.com ၏စီအီးအို